खस जातीले बनाए पहिचान स्थापित गराउन अहिले सम्मकै ठुलाे माेर्चा, अाेलीकाे गयाे साताे! -
खस जातीले बनाए पहिचान स्थापित गराउन अहिले सम्मकै ठुलाे माेर्चा, अाेलीकाे गयाे साताे!
१२ भाद्र २०७५, मंगलवार २१:२१ 8645 पटक हेरिएको
काठमाडाैँ । खस क्षेत्री एकता समाजको केन्द्रीय समितिको बैठक मंगलबार विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेतसहितका पदाधिकारीहरु खसलार्इ पहिचान दिलाउन राष्ट्रब्यापी रुपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
बैठकमा खस समाज तथा संगठनलार्इ मोर्चा बनाएर अगाडी बढाउने, अधिवेशन गर्ने, संविधानमा भएको आर्य खसको क्लष्टरबाट खस अगाडी बढाउने, खसका पक्षमा संविधान संसोधन गराउन चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलको क्रममा सल्लाकार समिति अध्यक्ष तथा संस्थापक अध्यक्ष युवराज कार्कीले खस जातीको पहिचान स्थापित गराउनै तीन पार्टी बिच एकिकरण भएको बताए। उनले मधेशी जनअधिकार फाेरम, संघीय समाजवादी पार्टी र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीबिच एकता भएर खस जातीकाे अावज झनै बुलन्द हुन पुगेकाे बताए।
उनले तीन पार्टीबिच एकिकरण भएर खस जातीलार्इ अाफ्नाे अाफ्नाे पहिचान स्थापित गर्न सजिलाे भएकाे बताए। नेता कार्कीले अहिलेकाे संविधानमा आर्य खस एकै ठाउँमा रहेकाेले खस जातीकाे पहिचान अाेझेलमा परेकाे बताए। त्यसैले अब आर्य र खस लार्इ संविधनमै खस जातीलार्इ अलग गराएर पहिचान स्थापि गर्नुपर्ने बताए। उनले खस जातीकाे पहिचान स्थापित गराउने मुद्दा उठाएर एजेण्डा बनाइ आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।
बैठकमा समाजका केन्द्रीय महासचिव इन्द्र बरालले खस जातीलार्इ सरकारले खासै वास्ता नगरेको आरोप लगाए। उनले अब खस जातीलार्इ छुट्टै पहिचानको रुपमा स्थापित गर्न सरकार विरुद्ध आन्दोलन नै छेड्नु पर्ने बताए। त्यसैगरी बैठकमा समाजका केन्द्रीय सचिव प्रेम नारायण थापाले विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका खस जातीलार्इ एकै ठाउँमा ल्यार्इ मोर्चा खडा गरी आफ्नो पहिचानको लागि अगाडी बढ्नु पर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै समाजले खस जातीको पहिचान स्थापित गराउन आज भएको छलफलमा वार्ता समितिसमेत गठन गरिएको छ । जसमा लक्ष्मण बस्ने, लिला बहादुर बस्नेत, इन्द्र बहादुर बराल, प्रेम नरायण थापा, डम्बर बहादुर बस्नेत र युवराज कार्की रहेका छन्।
त्यस्तै समाजले अधिवेशको तयारीका लागि उपसमितिसमेत गठन गरेको छ। आजको छलफलबाट खस जातीको पहिचान दिलाउन संचारमा के कसरी जाने सोको लागि संचार संयोजकमा दुर्गामाणि सुवेदिलार्इ चयन गरिएको छ।